विश्वकपमा ‘हट’ सुन्दरीको फोटो नखिच्न फिफाको चेतावनी ! - Everest Dainik - News from Nepal
विश्वकपमा ‘हट’ सुन्दरीको फोटो नखिच्न फिफाको चेतावनी !
काठमाडौं, असार ३० । रसियामा भइरहेको विश्वकपमा एकतर्फ कमजोर टोलीका खेलाडीले सबैलाई आश्चर्यचकित बनाए । त्यही स्टेडियममा रहेका सुन्दरी महिलाहरुलेपनि दर्शकको ध्यान आफूतिर तानेका छन् ।
याे पनि पढ्नुस विश्वकपमा क्रोएसियाकाे कमाल !
याे पनि पढ्नुस मोरक्कोका अजिजको आत्मघाति गोलले इरानको रोमाञ्चक जित
ट्याग्स: ‘हट’ सुन्दरी, Fifa world cup 2018